रवि र सालिकराम समर्थकहरुको दानापानी र बाटोखर्च कस्ले व्यहोरीरहेको छ ? यो छानविन हुनुपर्छ - jillakhabar.com Nepal's Digital News site
Home आर्थिक रवि र सालिकराम समर्थकहरुको दानापानी र बाटोखर्च कस्ले व्यहोरीरहेको छ ? यो छानविन हुनुपर्छ
रवि र सालिकराम समर्थकहरुको दानापानी र बाटोखर्च कस्ले व्यहोरीरहेको छ ? यो छानविन हुनुपर्छ
Posted By: जिल्लाखबर संवाददाताon: ३२ श्रावण २०७६, शनिबार १७:४८
वरिष्ठ पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या र त्यसपछि सार्वजनिक भिडियोले अहिले देशमै तरंग ल्याइरहेको छ । मृत्यु अगाडी सालिकरामले आफ्ना पुर्व सहकर्मी वरिष्ठ पत्रकार रवि लामिछाने सहितकाले आफुलाई मर्न बाध्य पारेको भन्दै भिडियो बनाएर आत्महत्या गरेको भनिएको छ । भिडियोलाई नै आधार मानेर प्रहरीले पत्रकार लामिछानेलाई पक्राउ गर्यो र घटनास्थल चितवन लग्यो । त्यसपछि रविको पक्षधरहरुले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै आन्दोलन चर्काउन थाले । उता सालिरामलै न्याय पाउनैपर्छ भनेर अर्काथरी आन्दोलन गर्न थालेका छन् । यसबाट घटना नै प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ । निर्दोष रवि दोषी ठहरिनुहुन्न र पिडित सालिकरामले पनि न्याय पाउनैपर्छ । रवि माथी लागेको दाग मेटाउन रविलाई सोधपुछ गर्नैपर्ने थियो तर त्यसो हुन दिइएन । उता भिडियो प्रति नै शंका उत्पन्न गर्नेहरु अर्थात रविलाई आरोप लगाएर फसाउन खोजिएको भन्नेहरुले पनि त्यो भिडियोे बनाउन कस्ले बाध्य पार्यो र किन बनाइयो ? भन्ने कहिलै खोजेनन् । सामाजिक सञ्जालभरी रोइलो गर्ने र कतिले यसैलाई डलरको मसला बनाएर चर्चा कमाउनेहरुको जमातले पनि घटनाको बारेमा वास्तविक सुजना जनताले पाउन सकेनन् । अहिले रविको पक्षमा देशै उल्टेर लागेको छ भने सालिकरामको पक्षमा पनि उत्तिकै ।
उसोभए किन प्रयोजन गरिएको छ त ? प्लेकार्ड देखी आवाससम्मको खर्च कसले व्यहोरेको छ ? यो छानविन हुनैपर्छ ।
हुनपनि देशका दिनदुखी र गरिव जनताका लागि यि दुवै भगवान बनेर उदाएका थिए । सालिकरामले मसला खोज्दै न्युज २४ टिभिको सिधा कुरा जनतासंग कार्यक्रममा पठाउँथे र रविले रिपोर्ट बनाएर बजाउँथे अनि ति मसलाका श्रोत अर्थात दिनदुखी जनताहरु लाभानिवत हुन्थे । अहिले एउटा भगवान सधैँ भगवानको शरणमा पुगेको छ भने अर्को भगवानलाई दैत्य बनाउन खोजिँदै छ । अब पुजा गरेको भगवानलाई राक्षस भन्न कसको मनले सक्ला र ? यही भएर रविको पक्षमा आन्दोलन भएका हुन् होईन र ? अनि भगवानलाई पुज्दापुज्दै यो त चर्पीको ढुंगा रहेछ भनेर कसैले फ्याँकिदियो भने पत्याइहाल्न कस्ले सक्ला र ? यही भएर सालिकरामले न्याय पाउनैपर्छ भनेर आन्दोलन गरिएको होईन र ? हामीले साधारण अर्थमा यही भन्छौँ तर भगवान पुज्नपनि हामी हजारको नोटबाट एक रुपैयाँको नोट खोज्छौँ नभए साटेर भनेनी ल्याउँछौ तर हजार कै नोट चढाउन हत्तपत आँट गर्नै सक्दैनौँ । अब हाम्रा भगवानका लागि गरिएका यि आन्दोलनहरु आफ्नै खर्चमा भएका होलान् त ? आस्था हुने सबैसंग धनको पोका थियो होला त ? सायदै नहुन सक्छ । अब होइन भने रवि र सालिकरामको न्यायका लागि गरिएका आन्दोलनको अन्नदाता को हो त ? कसले व्यहोर्छ आन्दोलनको दानापानी ? कस्ले दिन्छ गाडीभाडा ? उत्तर छ ? फलानाले भगवानका नाममा व्यहोरिदिएको छ होला तर के स्वार्थले ? यि भगवानको लागि गरिएका आन्दोलनबाट त पुण्य त कमाइन्न त ? न की पापबाट मुक्त हुन सकिन्छ । उसोभए किन प्रयोजन गरिएको छ त ? प्लेकार्ड देखी आवाससम्मको खर्च कसले व्यहोरेको छ ? यो छानविन हुनैपर्छ । बल्लमात्र निश्पक्ष न्यायको निसाफ हुनसक्छ । घटनाको सत्यतथ्य छानविन हुनैपर्छ यसको लागि नेपाल प्रहरी नै काफी छ तर यसलाई पनि दवाव र प्रलोभनमा नपारियोस् । कसैले स्वार्थले फैलाएका भ्रमहरुलाई नपत्याउने बानी हामीहरुले पनि बसाल्नुपर्छ । अन्त्यमा सालिकराम मर्न नहुनी थियो मरिसके, यदी उनलाई जवानीमै स्वर्गको ढोकामा पुराइएको भए यो कदापी स्विकार्य हुँदैन उनले न्याय पाउनैपर्छ र रवि लामिछाने जस्तो स्वच्छ छवी भएका पत्रकारलाई फसाउन खोजिएको हो भने उनलाई पनि न्याय दिनैपर्छ उनको जिवनको दाग मेटाउनैपर्छ । यदी दोषी भए दुवैले कारवाहीको भागिदार हुनैपर्छ त्यो सालिकराम होस् वा रवि ।
बागलुङमा दाइभाउजुकाे हत्या गर्ने हत्यारा सार्वजनिक, घरायसी विववदले उग्ररूप लिएपछि..
बागलुङ ढोरपाटनको पहिचान मासिनु हुँदैन : मन्त्री बाँस्कोटा
१६ श्रावण २०७४, सोमबार ०९:४५
जैमिनी नगरपालिकाले पेश गरेको बजेट बक्तव्य, कहाँ कती ? पुर्णपाठको भिडियो
प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्य लामिछानेको निधन
३१ बैशाख २०७५, सोमबार १४:४५
रोजगारको अवसर: रसुवागढी हाइड्रोपावरमा खुल्यो जागिर (विज्ञापन सहित)